Cilmi-baarayaashu waxay kobcin karaan daraasado waaweyn waxayna ku rusheeyaan nolosha dadka.
Qiimaynta xasaasiga ah ee cimilada (EMA) waxay ku lug leedahay samaynta sahamiin dhaqameed, iyaga oo u kala jajaban, kuna rusheeynaaya nolosha ka qaybgalayaasha. Sidaa daraadeed, su'aalaha sahanka waxaa lagu weydiin karaa wakhti iyo meel ku haboon, halkii ay ka dhici lahayd toddobaadyo wareysi oo dheer ka dib dhacdooyinka dhacay.
EMA waxaa lagu gartaa afar muuqaal: (1) ururinta xogta jawi-dhab ah ee dunida; (2) qiimeynta oo diiradda saareysa shakhsiyaadka haatan ama shakhsiyaadka dhowaanahan ama dabeecadaha dhow; (3) qiimayno oo noqon kara dhacdo ku salaysan dhacdooyin, waqti ku saleysan, ama si aan kala sooc lahayn loo soo gudbiyay (iyadoo ku xiran su'aasha cilmi-baarista); iyo (4) dhamaystirka qiimayno badan wakhtiga (Stone and Shiffman 1994) . EMA waa hab lagu waydiiyo taas oo si fudud u fududeyneysa taleefannada casriga oo ay dadku si joogta ah uula dhaqmaan maalinta oo dhan. Dheeraad ah, sababtoo ah telefoonnada casriga ah waxaa lagu buuxiyaa dareemayaasha - sida GPS iyo accelerometers - waxaa sii kordhaya suurtagalinta in lagu kobciyo cabirrada ku saleysan waxqabadka. Tusaale ahaan, casriga ayaa la qorsheyn karaa si loo kiciyo su'aasha sahan haddii uu jawaab celiyaha galo xaafad gaar ah.
Ballan-qaadka EMA waxaa si fiican u muujiyay cilmi-baarista nuxurka ee Naomi Sugie. Tan iyo 1970-yadii, Mareykanka ayaa si aad ah u kordhiyay tirada dadka ay tahay in ay xakameyso. Laga soo bilaabo 2005, qiyaastii 500 oo qof oo 100,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa xabsiga ku jiray, xaddiga xabsiga oo ka sareeya meel kasta oo adduunka ah (Wakefield and Uggen 2010) . Kororka tirada dadka soo gelaya xabsiga ayaa sidoo kale soo saaray tiro badan oo ah tiradii xabsiga ka baxday; qiyaastii 700,000 oo qof ayaa xabsiga ka baxaya sanad walba (Wakefield and Uggen 2010) . Dadkani waxay la kulmaan caqabado adag markay xabsiga ka soo baxaan, nasiib daro dad badan ayaa dib ugu soo laabanaya. Si loo fahmo oo loo yareeyo dib-u-celinta, cilmi-bulsheed iyo siyaasad-dejiyayaashu waxay u baahan yihiin inay fahmaan waayo-aragnimada dadka markay soo galaan bulshada. Si kastaba ha noqotee, xogahan way adagtahay in la ururiyo hababka sahanka caadiga ah sababta oo ah dembiilayaashu way adagtahay in ay wax bartaan oo noloshoodu aad u degganaan waayaan. Nidaamyada cabbiraadda ee loo diro sahammo dhowr bilood oo bilaash ah ayaa seegay qadar balaadhan oo ah noloshooda (Sugie 2016) .
Si loo barto nidaamka dib-u-soo-galinta iyadoo la tixgelinayo qadarin badan, Sugie wuxuu soo qaaday 131 qof oo ka mid ah liiska buuxa ee shakhsiyaadka ka baxaya xabsiga Newark, New Jersey. Waxa ay siisay qof kasta oo ka mid ah casriga, kaas oo noqday xog ururinta xogta hodanka ah, labadaba si loogu dabaaldego dabeecadda iyo su'aalaha. Sugie wuxuu isticmaalaa telefoonnada si loo maamulo laba nooc oo sahan. Ugu horreyn, waxay u dirtay "sahan qadarin ah ee sahan" wakhti aan caadi ahayn ee u dhaxaysa 9 subaxnimo iyo 6 galabnimo oo ka codsaneysa ka qaybgalayaasha waxqabadyadooda iyo dareenkooda. Marka labaad, 7-da duhurnimo, waxay u dirtay "sahan maalinle ah" oo waydiisatay dhammaan waxqabadyada maalintaas. Intaa waxaa dheer, marka lagu daro su'aalaha sahanka, telefoonada waxay ku diiwaangashadeen juqraafi ahaan xilliyada joogtada ah waxayna diiwaan galiyeen diiwaanka dokumentiga iyo macluumaadka qoraallada. Isticmaalida habkan-oo isku darsaday weydiinta iyo indha-urta-Sugie wuxuu awood u lahaa inuu abuuro qiyaas aad u fara badan oo lagu cabiro oo ku saabsan nolosha dadkan marka ay dib u soo galeen bulshada.
Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in helitaanka shaqaale tayadoodu sarayso oo tayo sare leh ay dadka ku caawiso si guul ah dib ugu noqoshada bulshada Si kastaba ha ahaatee, Sugie wuxuu helay, in celcelis ahaan, waayo-aragnimadooda kaqaybqaatayaasha kaqeybgalayaashu waxay ahayd mid aan rasmi ahayn, ku-meel-gaadh ah, oo aan haboonayn Tilmaame-celinta qaabka celceliska, si kastaba ha ahaatee, maskaxaha ayaa muhiim u ah heterogaanta. Gaar ahaan, Sugie waxa ay heshay afar qaab oo kala duwan oo ka mid ah hawsheeda kaqaybgalayaasha: "ka bixitaanka hore" (kuwa bilaaba raadinta shaqo, laakiin markaa ka baxaya suuqa shaqada), "raadinta joogtada ah" (kuwa ku qarashka badan ee raadinaya shaqo) , "Shaqeyn soo noqnoqoneysa" (kuwa ku bixiya inta badan mudada shaqeynaya), iyo "jawaab hooseeya" (kuwa aan si joogto ah uga jawaabin baaritaannada si joogto ah). Kooxda "ka bixitaanka hore" - kuwa bilaaba raadinta shaqada, ka dibna ma helin oo ay joojiyaan raadinta - ayaa si gaar ah muhiim ugu ah sababtoo ah kooxdani waxay u badan tahay inay u badantahay inay dib u soo noqoto.
Mid ka mid malaha malaha in shaqo raadinta ka dib markii xabsiga lagu jiro uu yahay geedi socod adag, taas oo keeni karta niyadjab ka dibna ka baxa suuqa shaqada. Sidaas darteed, Sugie waxay isticmaashay sahankeeda si ay u ururiso xog ku saabsan xaaladda dareenka ee ka qaybgalayaasha - dawlad-goboleed aan si fudud loo qiyaasin xogta akhlaaqda. Waxaa la yaab leh, waxay ogaatay in "kooxda ka bixitaanka hore" aysan soo sheegin heerarka sare ee walaaca ama isku-buuq la'aanta. Taas, waxa ay ahayd mid iska soo horjeeda: kuwa sii waday inay shaqo raadsadaan waxay soo sheegeen dareemo dareen badan. Dhamaan ficilladan caan ku ah, tan dheeriga ah ee ku saabsan dabeecadda iyo xaaladda dareenka ee dembiilayaashii hore waa muhiim in la fahmo caqabadaha ay la kulmayaan iyo yareynayaan isbedelkooda ku soo noqoshada bulshada. Dheeraad ah, dhammaan faahfaahintaan ganaaxa leh ayaa la seegay sahankan.
Ururinta xogta Sugie ee dadweynaha nugul, gaar ahaan xog ururinta xogta, waxay kor u qaadi kartaa welwelka anshaxa. Laakiin Sugie waxa ay filaysay walaacaas waxayna ku (Sugie 2014, 2016) naqshadeeda (Sugie 2014, 2016) . Hannaankeedana waxaa dib-u-eegay dhinac saddexaad - jaamacaddeeda Hay'adda dib-u-eegida ee jaamacadeed-waxayna u hoggaansantay sharciyada jira. Dheeraad ah, waafaqsan habka mabaadi'da ku salaysan ee aan u doodayo cutubka 6, habka Sugie ayaa ka fogaaday waxa laga rabay xeerarka jira. Tusaale ahaan, waxay heshay oggolaansho macquul ah oo ka timid kaqeybgal kasta, waxay u suurtagashay kaqeybgalayaasha in ay si ku meel gaar ah u daba galaan raadinta juqraafi, waxayna ku qaadatay dherer weyn si ay u ilaaliso xogta ay ururinaysay. Marka lagu daro isticmaalka sirta habboon ee xogta iyo keydinta xogta, waxay sidoo kale heshay shahaadada Sirta ee ka timid dawladda federaalka, taas oo macnaheedu ahaa in aan lagu qasbi karin in ay u gudbiso xogta booliska (Beskow, Dame, and Costello 2008) . Waxaan u maleynayaa in habka ay u fikirto, mashruuca Sugie wuxuu siiyaa moodal qiimo leh cilmi baarayaasha kale. Gaar ahaan, ma indhotirto indho la'aan anshax xumo ah, mana ka fogaatay cilmi-baaris muhiim ah maxaa yeelay waxay ahayd arrin adag. Taas bedelkeeda, waxay si taxadar leh u fakartay, waxay raadsatay talobixin ku habboon, ixtiraamka kaqeybgalayaasheeda, waxayna qaadatay tallaabooyin lagu hormarinayo khatarta faa'idada faa'iido u leh daraasaddeeda
Waxaan u maleynayaa in ay jiraan saddex cashar oo guud oo laga soo qaatay shaqada Sugie. Marka hore, habab cusub oo lagu weydiiyo waxay si buuxda ugu habboon yihiin hababka caadiga ah ee tijaabada; xasuusnoow in Sugie uu qaaday muunad ka dhigan heerka caadiga ah oo ka soo jeeda beelaha si fiican loo qeexay. Qiyaasta labaad, qiyaasta dheeraadka ah, cabbiraadda dheeraadka ah waxay noqon kartaa mid qiimo badan u leh barashada khibradaha bulshada ee aan joogto ahayn oo firfircoon. Marka saddexaad, marka xog ururinta xog ururintu ay la socoto ilo xogeed oo weyn - wax aan u malaynayo inay noqon doonto mid sii kordhaysa, sida aan kuugu doodi doono mar dambe cutubkan - arimaha quseeya anshaxa ayaa kici kara. Anigu waxaan faahfaahin dheeraad ah ka bixinayaa anshaxa cilmi-baarista ee cutubka 6, laakiin shaqada Sugie waxay muujineysaa in arrimahan ay yihiin kuwo caqabad ku ah cilmi-baarayaasha khibrada leh iyo kuwa fekerka leh.